Sheekada filimka Simmba: Ranveer Singh iyo Rohit Shetty oo la imaadeen fariin aan indhaha laga qaadi karin – Filimside.net
Sheekada filimka Simmba: Ranveer Singh iyo Rohit Shetty oo la imaadeen fariin aan indhaha laga qaadi karin
Simmba sheeko ahaan waxaa laga soo min guuriyay filimka Temper ee Telugu ah 2015 la daawaday sidoo kalena ku xarakeeyay Jr. NTR wuxuuna ahaa filim mada daalo dhameestiran leh sidoo kalena siweyn kuu qiiro galinaayo bandhig ahaana jilaa kasto oo kasoo muuqday siweyn loogu amaanay. Haddaba waxaa is weydiin mudan Simmba sida Temper ma xiiso badnaan doonaa?
Jilaayaasha filimkan: Ranveer Singh, Sara Ali Khan, Sonu SoodRanveer Singh, Sara Ali Khan, Sonu Sood, Ashutosh Rana, Siddhartha Jadhav, Ashok Samartha
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac.
Fariinta Filimka Simmba Oo Kooban: Singham (Ajay Devgn) wuxuu ka sheekeenayaa sheekada wiilka lagu magacaabo Sangram Bhalerao aka Simmba (Ranveer Singh) oo ay hal magaalo kusoo wada koreen. Simmba (Ranveer Singh) wuxuu leeyahay hal riyo oo ah inuu askari noqdo laakiin wuxuu rabaa magaca askarinimo inuu lacag ka sameeyo ee sumcad uma xiranaayo labiska ciidanka.
Simmba (Ranveer Singh) ma ahan askari masuuliyad qaadi karo, mana kala jeclo dhibka iyo dheefta shacabka balse qalbi wanaagsan ayuu leeyahay kaasi oo marka dambe xumaanta ka reebi doono wuxuuna la shaqeestaa oo uu laaluush iyo lacago kale oo sharci daro ka qaataa tuuga weyn ee laga dambeeyo Durva Ranande (Sonu Sood).
Simmba (Ranveer Singh) magaalo kale ayaa loo soo badalaa waxayna halkaas isku baranayaan gabadha lagu magacaabo Shagun [Sara Ali Khan] kadibna jaceyl adag ayaa dhex maraayo iyo is fahan weyn.
Simmba (Ranveer Singh) sidoo kalena waxay is baranayaan gabadha isaga walaal ka dhigato Aakruti [Vaidehi Parashurami] waa ardayad caafimaadka barato sidoo kalena caruurta faqiiriinta ah wax barto. Aakruti [Vaidehi Parashurami] waxay ogaanee caruurta ay wax barto in daroogada ay ku tijaabsadaan nooca halista ah sidoo kalena caruurta u gadaan ama ku qarsadaan daroogada nooca halista ah tuugada kala ah [Saurabh Gokhale iyo Amrit Singh] waxayna la dhasheen burcadka weyn ee laga dambeeyo Durva [Sonu Sood].
Aakruti [Vaidehi Parashurami] waxay dabagal ku sameenee tuugada waxayna soo ogaanee halka ay daroogada ku sameeyaan ama ku qarsadaan kadibna sawiro badan iyo Video cadeemo ah ayay Taleefoonkeeda gacanta (Mobile-ka) kusoo qaadaneysaa.
Laakiin nasiib daro tuugada ayaa gacanta ku dhigayaan Aakruti [Vaidehi Parashurami] waxaana filimkan loo daawan doonaa askariga aan daacada ahayn Simmba (Ranveer Singh) marka uu ogaado gabadha walaashiis ka dhigatay in la weesan yahay sidoo kalena booliska la shaqeeyaan ku dhiiri galinayaan inuu nin fiican noqdo sida uu ula dagaalami doono xoog iyo xeelad burcadka weyn Druva (Sonu Sood) iyo labadiisa walaal ee tuugada ah.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Simmba:
Director Rohit Shetty waa filim sameeye aan lagu gaarin dhanka mada daalada marnaba kuma niyad jibin doono wuxuu Simmba ka dhigay filim fariin ahaan ka wanaagsan Temper oo ah filimka sheekadan asal ahaan laga soo min guuriyay.
Hindiya ama Bollywood-ka waxay 70-maadkii iyo 80-maadkii heesan jireen Director Manmohan Desai oo looga haray sameynta filimada mada daalada dhameestiran leh wuxuu ahaa ninkii Superstar awood badan ka dhigay Amitabh oo u sameeyay aflaanta Classic ah sida Amar Akbar Anthony, Parvarish, Suhaag, Naseeb, Desh Premee, Coolie, Mard and Ganga Jamuna Saraswati.
Sidoo kalena Manmohan Desai waa ninkii sameeyay filimka Blockbuster-ka weyn noqday Dharam Veer haatana Bollywood-ka waxay di u heleen Rohit Shetty oo qaabkii Manmohan Desai oo kale filimada u sameeyo.
Rohit Shetty bal dib u eeg aflaanta uu sameeyay taxanaha Golmaal, Singham, Chennai Express iyo Bol Bachchan waxay ka siman yihiin inay mada daalo dhameestiran leeyihiin. Haatana liiska aflaantiisa aadka u tayada wanaagsan shaki la’aan Simmba ayaa ku biiray.
Waxaa cajiib ah sida Simmba uu Rohit Shetty isugu daba riday waa filim qiiro badan, Action-kiisa sareeyo, Dance iyo heeso wacan leh shactirana kama marno labo saac oo dhinac walbo ka dheeli tiran ayuu mudane Rohit la yimid.
Bandhiga Jilaayaasha: Ranveer Singh waa tilaabsatay wuxuuna ku biiray si dhaqsi ah liiska atoorayaasha Action Hero Image yeelan karaan inaba caadi ma ahan doorkiisa filimka Simmba waa mid aan waligiis ka hari doonin. Waa hubaal in shacbiyad iyo taageero balaaran uu Ranveer ka dhex heli doono bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dabaqada dhexe iyo hoose waana shacabka atoore ka dhigaan Superstar.
Waqtigii saxda ahaa ayuu Ranveer doortay sameynta Simmba!
Sara Ali Khan wacdaraheeda ayay wadataa filimkeedii kowaad Kedarnath shaashada bandhig adag ayay la timid markaana Simmba door wacan ayaa laga siiyay inkastoo filimkan Ranveer Singh awood ahaan gabadhaan hareeyay gaar ahaan halka saac dambe saameyn xoogan kuma lahan.
Sonu Sood inaba caadi ma ahan haddii isaga uusan laadar ka ahaan Simmba micno weyn ma sameyn laheyn door adag oo weliba si heer sare ah loo diyaariyay ayuu qaatay. Weliba Sonu marwalbo oo ay Ranveer waji ka waji u kulmaan wacdaro ayaa dhacaayo.
Ajay Devgn iyo Akshay Kumar muuqaalada martida ah ay ku leeyihiin filimkan waa kuwo xiiso badan saameyn adagna la imaadeen sidoo kalena daawadayaasha u sacbin doonaan si la mid ah kooxda Golmaal ([Arshad Warsi, Tusshar Kapoor, Shreyas Talpade iyo Kunal Kemmu] muuqaalkooda martida ah isagana amaantiisa ayuu mudan yahay.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Simmba:
Fariinta filimkan oo dhan walbo ka dheeli tiran Action, dareen qiiro badan, fariin waaqici ah iyo muusig wacan
Goobaha lagu duubay oo aad u qurux badan, muusiga gadaal ka yeereyso Background Score oo si heer sare ah loo diyaariyay.
Haddalada la adeegsanayo inaba caadi ma ahan waa hadalo nuxur leh sidoo kalena loo diyaariyay in daawadayaasha xasuus ku reebaan.
Bandhiga Ranveer Singh oo Simmba ku helay aqoonsi dhanka Action-ka inuu siweyn kaga baxsan karo doorkiisa askarinimo.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Simmba:
Waa filim reer magaalka kuwa dabaqa sare xoogaa fariin ahaan ka heli doonaan madaama muuqaalo aan maangal ahayn ku jiraan gaar ahaan habka Action-mada qaar loo sameenayo.
Qiimeynta Sheekada Simmba: 4/5 (Afar Xidig)
Gunaanad: Simmba hubaal ahaan waa Blockbuster dhameestiran inaba caadi ma ahan Rohit Shetty iyo Ranveer Singh iskaashigooda cusub waxayna 2018 kusoo gaba gabeyn doonaan filim daawadayaasha ku qasbo inaysan tiyaatarada Single Screens iyo Multiplex aysan marbana ka baaqanin.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Simmba ee sida weyn la isugu raacay inuu yahay mashruuc mada daalo dhameestiran leh Boxoffice-kana qabsan doono:
Waxaa Aqrisay 1,416
Critics Choice Film Awards 2019: Alia Bhatt, Shah Rukh Khan Iyo Xidigo Kale Oo Wacdaro Ka Dhigeen Xaflada (+Sawiro) April 22, 2019